ကိုယ့်ကိုယ်တောင် မပိုင်တဲ့ လောကကြီးမှာ သူ့ကို ပိုင်ချင်နေတဲ့ ကျွန်မကလဲ ရူးတယ် … – Shinyoon
ကိုယ့်ကိုယ်တောင် မပိုင်တဲ့ လောကကြီးမှာ သူ့ကို ပိုင်ချင်နေတဲ့ ကျွန်မကလဲ ရူးတယ် …
သေတစ်နေ့ မွေးတစ်နေ့တဲ့ မချစ်တတ်ခင်ထိကတော့ ဘာပြဿနာမှ မရှိခဲ့ဘူး ကိုယ့်အိပ်မက်တွေကို ထုဆစ်ရင်းက ကိုယ့်မျှော်လင့်ချက်တွေကို လျှောက်လှမ်းရင်းက ကျွန်မ အချိန်တွေ ကုန်နေခဲ့တာလေ ..သူ့ကို မချစ်မိခင်အထိ ကျွန်မ ဘဝမှာပျော်ပါတယ် ….
သူ့… နှုတ်ခမ်းပါးလေးနဲ့ ပြုံးပြတတ်တဲ့သူလေ … တစ်ခါတစ်လေ စကားလုံးလှလှလေးတွေနဲ့ ကျွန်မ နှလုံးသားကို လှုပ်နိုးတတ်တယ် ချစ်မိပြီဆိုတဲ့အနောက်မှာ ဘယ်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ အတ္တတွေ ပါတတ်ကြပါတယ် မပိုင်ဆိုင်လဲ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကတော့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရတော့လို့သာ ရင်နာနာနဲ့ပြောတဲ့စကားပေါ့
ကျွန်မကတော့ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် ကျွန်မ ချစ်နေမိတဲ့ သူ့ကို ပိုင်ချင်မိတယ် ရေစက်ရှိလို့ဆုံခဲ့ရင် ရေစက်တွေမကုန်ချင်ခဲ့သလို ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်းဆိုတဲ့ သင်္ခါရတရားကို ဒီအချိန်မှာတော့ ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ချင်နေမိတာ ဒီဇာတ်လမ်းတွေ ဘယ်တော့မှ မဆုံးချင်ဘူး
အိပ်မက်တွေ မက်လို့မှ မပြီးသေးခင် အနာဂတ်တွေအကြောင်းတွေးလို့မှ မပြီးသေးခင် တဖြေးဖြေးဝေးသွားကြတာများ တစ်ချိန်က နီးခဲ့ဖူးတယ်လို့ပြောရင် ဘယ်သူမှ ယုံမှာတောင်မဟုတ်တော့ဘူးလေ
ကျွန်မကလဲ ရူးတယ် ကိုယ့်ကိုယ်တောင် မပိုင်တဲ့ လောကကြီးမှာ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်ကို ပိုင်ချင်နေမိတာ အချစ်ဟာ ဖြူတယ်တဲ့ ကျွန်မ အချစ်တွေကတော့ အတ္တတွေ ပါခဲ့လို့ထင်ပါတယ် ကိုယ်ပဲ ပူနေရပါတယ် ။
ကိုယ့္ကိုယ္ေတာင္ မပိုင္တဲ့ ေလာကၾကီးမွာ သူ့ကုိ ပုိင္ခ်င္ေနတဲ့ ကြ်န္မကလဲ ရူးတယ္ …
ေသတစ္ေန့ ေမြးတစ္ေန့တဲ့ မခ်စ္တတ္ခင္ထိကေတာ့ ဘာျပႆနာမွ မရွိခဲ့ဘူး ကိုယ့္အိပ္မက္ေတြကို ထုဆစ္ရင္းက ကိုယ့္ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ေလွ်ာက္လွမ္းရင္းက ကြ်န္မ အခ်ိန္ေတြ ကုန္ေနခဲ့တာေလ ..သူ့ကို မခ်စ္မိခင္အထိ ကြ်န္မ ဘ၀မွာေပ်ာ္ပါတယ္ ….
သူ့… နႈတ္ခမ္းပါးေလးနဲ႕ ျပံဳးျပတတ္တဲ့သူေလ … တစ္ခါတစ္ေလ စကားလံုးလွလွေလးေတြနဲ႕ ကြ်န္မ နွလံုးသားကို လႈပ္နိုးတတ္တယ္ ခ်စ္မိျပီဆုိတဲ့အေနာက္မွာ ဘယ္သူမဆို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ အတၱေတြ ပါတတ္ၾကပါတယ္ မပိုင္ဆိုင္လဲ ျဖစ္ပါတယ္ဆိုတဲ့သူေတြကေတာ့ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မရေတာ့လုိ့သာ ရင္နာနာနဲ႕ေျပာတဲ့စကားေပါ့
ကြ်န္္မကေတာ့ အမွန္အတိုင္း၀န္ခံရရင္ ကြ်န္္မ ခ်စ္ေနမိတဲ့ သူ့ကုိ ပုိင္ခ်င္မိတယ္ ေရစက္ရွိလို့ဆံုခဲ့ရင္ ေရစက္ေတြမကုန္္ခ်င္ခဲ့သလုိ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းဆိုတဲ့ သခၤါရတရားကို ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ျဖစ္ျခင္းနဲ႔ပဲ အဆံုးသတ္ခ်င္ေနမိတာ ဒီဇာတ္လမ္းေတြ ဘယ္ေတာ့မွ မဆံုးခ်င္ဘူး
အိပ္မက္ေတြ မက္လို့မွ မျပီးေသးခင္ အနာဂတ္ေတြအေၾကာင္းေတြးလို့မွ မျပီးေသးခင္ တေျဖးေျဖးေ၀းသြားၾကတာမ်ား တစ္ခ်ိန္က နီးခဲ့ဖူးတယ္လို့ေျပာရင္ ဘယ္သူမွ ယံုမွာေတာင္မဟုတ္ေတာ့ဘူးေလ
ကြ်န္မကလဲ ရူးတယ္ ကိုယ့္ကိုယ္ေတာင္ မပိုင္တဲ့ ေလာကၾကီးမွာ ကိုယ္မဟုတ္တဲ့ သူစိမ္းတစ္ေယာက္ကို ပုိင္ခ်င္ေနမိတာ အခ်စ္ဟာ ျဖဴတယ္တဲ့ ကြ်န္မ အခ်စ္ေတြကေတာ့ အတၱေတြ ပါခဲ့လုိ့ထင္ပါတယ္ ကုိယ္ပဲ ပူေနရပါတယ္ ။
ထားခဲ့ပြီးပြီမလား ဘာလို့ပြန်လာသေးတာလဲ …